CADEYN: Kalfadhiga baarlamaanka Soomaaliya oo socda & 3 Qodob oo xasaasi ah horyaala baarlamaanka, kuna Saabsan DP WORLD – Puntlandtimes
CADEYN: Kalfadhiga baarlamaanka Soomaaliya oo socda & 3 Qodob oo xasaasi ah horyaala baarlamaanka, kuna Saabsan DP WORLD
MUQDISHO(P-TIMES)- Baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya oo hadda wali u socdo kalfadhigoodii ayay ka doodayaan arrimaha la xariira Mashaariicda DP WORLD ay ka wado gudaha dalka, gaar ahaana Dekedaha Boosaaso & Berbera oo ay la wareegtay dhawaan.
War qoraal ah oo ay goor dhaw heshay Puntlandtimes.com waxay muujinayaan in xeer ay soo diyaariyeen Mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo laga doodayaa uu leeyahay sadex kala doorasho oo ay ogolaanshaheeda leeyihiin baarlamaanka Faderaalka.
Qodobada laga doodayo waxaa kamid ah.
In DP WORLD ay ku xadgudubtay Madax bananida Soomaaliya, dibna loo eego.
In DP WORLD gabi ahaanba laga saaro Soomaaliya, sidaasna lagu wargaliyo dawladda Imaaraatka Carabta.
In Madaxda dawladda Soomaaliya ay si rasmi ah uga hadlaan arrimahan oo ay u gudbiyeen Imaaraatka Carabta, hor yimaadana baarlamaanka Faderaalka.
Laakiin ilaa hadda sidda ay doodu u socoto ayaa ah mid xasaasi ah, waxaana suuragal ah in la raaco qaraarka sheegaya in DP WORLD laga saaro guud ahaan Soomaaliya, balse codka baarlamaanka ayuu ku xiran yahay qaraarkan.